बागलुङको पहिचान बुट्टेनली सङ्कटमा – Tandav News
ताण्डव न्यूज द्वारा	 २०७५ पुष २९ गते आईतवार १३:२२ मा प्रकाशित
बागलुङ भित्रने जो कोहीले बुट्टेनलीका बारेमा जिज्ञासा राखेकै हुन्छन् – यो के हो ? कसरी बनाइन्छ ? तर, यसको स्पष्ट जवाफ जिल्लाका अधिकाँशसँग छैन । संस्कृति र परम्परा जोडिएका यी बुट्टेनली हातले कुँदेर तयार पारिन्छ । बागलुङको पहिचानका रुपमा राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रख्यात रहे पनि पुस्तान्तरण नहुँदा यो कला लोप हुने अवस्थामा छ ।
“केही वर्ष अघिसम्म बागलुङको चिनारीका रुपमा आगन्तुक पाहुनाहरुले खोजी खोजी किनेर लैजाने गरेको बुट्टेनलीको उचित प्रचारप्रसार तथा स्रोत, साधनकोे अभाव हुँदा लोप हुने अवस्था आएको छ,” राजभण्डारीले भने – “बुट्टेनली निर्माण गर्ने शीप नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण हुन नसक्दा यस्तो अवस्था आएको हो ।”
बुट्टेनलीलाई प्रचारप्रसार गर्न सरोकारवाला निकाय नै जागरुक भएर लाग्नु पर्ने राजभण्डारी बताउँछन् । राजभण्डारीका अनुसार एउटा बुट्टेनली बनाउन चारदेखि पाँच दिनसम्म समय लाग्ने गर्छ । विभिन्न प्रकारका चित्रहरु कोरेर निर्माण गरिने नलीलाई उनी तीन हजारदेखि चार हजार रुपैयाँसम्म लिएर बेच्ने गर्छन । बाँसुरी तथा मुरलीलाई दुई हजार रुपैयाँसम्म पर्छ ।
बागलुङमा बुट्टेनली बनाउने कालिगड भेट्न मुश्किल भएका बेला यस्तो कलाकारितामा लागिरहने आफू एक्लो कलाकार भएको उनी दाबी गर्छन । उनी भन्दा अगाडि बागलुङ बजारमा यस्तो पेशा अपनाउने बाबुराम बज्राचार्य थिए । उनको मृत्यु सँगै बुट्टेनली थप सङ्कटमा परेको हो । बागलुङ उद्योग बाणिज्य सङ्घ र बागलुङ हस्तकला सङ्घले जिल्ला कारागार बागलुङका केही कैदीबन्दीलाई केही वर्ष अगाडि बुट्टेनली कुद्ने कला सिकाए पनि बजार समस्याका कारण यो सम्पदा संरक्षण गर्न समस्या परेको उद्योग वाणिज्य सङ्घले जनाएको छ ।
हस्तकलाका शिल्पीहरुले तयार पार्ने बुट्टेनली, नेपाली कागज र अल्लोको धागो बागलुङका चिनारी मानिन्छन् । बागलुङका हस्तकला शिल्पीहरु तथा सम्पदा प्रेमीहरु अब बुट्टेनली इतिहासमा मात्र सीमित हुने हो कि भन्ने चिन्तामा पर्न थालेका छन् । बागलुङ हस्तकला सङ्घका संस्थापक अध्यक्ष इन्द्र श्रेष्ठले जिल्लामा भित्रने आगन्तुक पर्यटकलाई बुट्टेनलीको महत्वबारे जानकारी दिन आवश्यक रहेको ठान्छन् । “मेला महोत्सवमा प्रर्दशनीमा बुट्टेनली राखेका हुन्छौं,” श्रेष्ठले भने – “अबको स्थानीय सरकारले समेत यसलाई चासोका साथ हेर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।”
विसं १९९० तिर एउटा बुट्टेनलीलाई कलाकारले मोहरमा बिक्री गर्ने भएता पनि अहिले मूल्य बढेको छ । यद्यपि अहिले भने एकजनाले मात्र बनाउने बुट्टेनलीले समेत बजार पाउन मुश्किल परेको बताइन्छ । बागलुङका चिनारीहरुलाई प्रर्वद्धन गर्न सकिए यसले जिल्लाकै पर्यटन विकासमा टेवा पुर्याउने निश्चित भएको संस्कृतिप्रेमीहरु विश्वास गर्छन् ।
बागलुङमा पछिल्लो समयमा नेपालमै दुर्लभ मानिएको हनुमान नाच संरक्षण गरिए जस्तै बुट्टेनलीलाई पनि संरक्षण र प्रचार प्रसार गर्न आवश्यक छ । अढाइ सय वर्षभन्दा पुरानो इतिहास बोकेको बुट्टेनलीलाई बागलुङकै पुरानो र मौलिक कलाका रुपमा लिइँदै आइएको बागलुङ हस्तकला सङ्घका संरक्षक तथा साहित्यकार प्रेम छोटाले बताए । स्थानीय बासिन्दाको प्रयत्नले मात्र अपेक्षित नतीजा नआउने भएकाले स्थानीय सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रर्वद्धन गर्नुपर्ने धारणा उनी राख्छन् । रासस
चार लाख घुससहित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका सहयोगी पक्राउ